ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်တော့တဲ့ တစ်နေ့ကျရင်တော့ လက်တွဲဖြုတ်ပေးလိုက်မှာပါ … – Shinyoon
ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်တော့တဲ့ တစ်နေ့ကျရင်တော့ လက်တွဲဖြုတ်ပေးလိုက်မှာပါ …
ကိုယ့်အနားမှာ ရပ်နေရင်းက တခြားကို စိတ်ရောက်နေတာထက်စာရင်တော့ လူချင်းဝေးပြီး လွမ်းနေရတာက ပိုပြီးသာမယ်ထင်ပါတယ် ။ ဆွဲထားတဲ့လက်တွေဟာ အသက်တွေမဲ့နေတတ်သလို အပြုံးတွေဟာလဲ အရင်တုန်းးကလို အသက်မှ မပါတော့ပဲလေ . ကိုယ့်အနား ရပ်နေရုံပဲ ရှိတာပါ ကိုယ့်အနားမှာ သူ မှ မပျော်တော့တာ ။
တခြားသူတွေနဲ့ဆို စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ပြောတတ်သလောက် ကိုယ်နဲ့ဆို တေမိလို ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုလဲ အံ့သြတယ် … ဘာကြောင့်များလဲဆိုတဲ့အဖြေတွေရှာနေမိပေမယ့်လဲ ရလာမယ့်အဖြေတွေကိုကျပြန်တော့ မလိုချင်ပြန်ဘူး .. တကယ်ဆို သူက တခြားဘယ်သူနဲ့မဆို ပျော်အောင် နေတတ်တယ် ကိုယ့်အနားရှိရင်သာ မပျော်တာပါ ။
ကိုယ့်အနားရှိရင် သူပျော်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အယုံလွန်ခဲ့တာတွေလဲ ပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးနေမိတာတွေဟာလဲ မှားတယ် ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ်ကပဲ သူ့ကို လိုအပ်တာပါ သူ့အတွက်ကျပြန်တော့ ကိုယ်မရှိတဲ့အရပ်ဟာ သူ့အတွက် အပူပင် အကင်းဆုံးပါပဲ ။
အချိန်တွေလဲ အကြာကြီး အတူရှိခဲ့ဖူးတာပဲ မျက်နှာလေးပျက်သွားတာ အစ မျက်တောင်လေး ခတ်လိုက်တာတစ်ဆုံး အတိအကျကြီး ဘာသာမပြန်တတ်ခဲ့ရင်တောင် အနီးစပ်ဆုံးတော့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်တတ်ခဲ့ပါတယ် … သူမှ ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်တော့တာ ဒီဇာတ်လမ်းတွေ ဒီမှာတင် တစ်ခန်းရပ်ကြရုံပေါ့ ။
ကိုယ့္အနားမွာ မေပ်ာ္ေတာ့တဲ့ တစ္ေန့က်ရင္ေတာ့ လက္တြဲျဖဳတ္ေပးလုိက္မွာပါ …
ကိုယ့္အနားမွာ ရပ္ေနရင္းက တျခားကို စိတ္ေရာက္ေနတာထက္စာရင္ေတာ့ လူခ်င္းေ၀းျပီး လြမ္းေနရတာက ပိုျပီးသာမယ္ထင္ပါတယ္ ။ ဆြဲထားတဲ့လက္ေတြဟာ အသက္ေတြမဲ့ေနတတ္သလုိ အျပံဳးေတြဟာလဲ အရင္တုနး္းကလို အသက္မွ မပါေတာ့ပဲေလ . ကုိယ့္အနား ရပ္ေနရံုပဲ ရွိတာပါ ကိုယ့္အနားမွာ သူ မွ မေပ်ာ္ေတာ့တာ ။
တျခားသူေတြနဲ႔ဆုိ စကားေတြ ေဖာင္ဖြဲ႔ေျပာတတ္သေလာက္ ကုိိယ္နဲ႔ဆို ေတမိလုိ ျဖစ္သြားတတ္တဲ့ သူ့ႏႈတ္ခမ္းေတြကိုလဲ အံ့ၾသတယ္ … ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲဆုိတဲ့အေျဖေတြရွာေနမိေပမယ့္လဲ ရလာမယ့္အေျဖေတြကိုက်ျပန္ေတာ့ မလိုခ်င္္ျပန္ဘူး .. တကယ္ဆုိ သူက တျခားဘယ္သူနဲ႔မဆုိ ေပ်ာ္ေအာင္ ေနတတ္တယ္ ကုိယ့္အနားရွိရင္သာ မေပ်ာ္တာပါ ။
ကိုယ့္အနားရွိရင္ သူေပ်ာ္လိမ့္မယ္ဆိုျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုိယ္ အယံုလြန္ခဲ့တာေတြလဲ ပါတယ္ ကိုယ့္ကို္ယ္ကို္ယ္ အထင္ၾကီးေနမိတာေတြဟာလဲ မွားတယ္ ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကိုယ္ကပဲ သူ့ကို လုိအပ္တာပါ သူ့အတြက္က်ျပန္ေတာ့ ကိုယ္မရွိတဲ့အရပ္ဟာ သူ့အတြက္ အပူပင္ အကင္းဆံုးပါပဲ ။
အခ်ိန္ေတြလဲ အၾကာၾကီး အတူရွိခဲ့ဖူးတာပဲ မ်က္ႏွာေလးပ်က္သြားတာ အစ မ်က္ေတာင္ေလး ခတ္လုိက္တာတစ္ဆံုး အတိအက်ၾကီး ဘာသာမျပန္တတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ အနီိးစပ္ဆံုးေတာ့ အဓိပၸါယ္ေကာက္တတ္ခဲ့ပါတယ္ … သူမွ ကိုယ့္အနားမွာ မေပ်ာ္ေတာ့တာ ဒီဇာတ္လမ္းေတြ ဒီမွာတင္ တစ္ခန္းရပ္ၾကရံုေပါ့ ။
မနာကျင်ချင်တော့လို့သာ လွှတ်ချလိုက်မိတာပါ ။